Real Estate Listings: » Residential homes » CA » Ontario » Mississauga » 1333 Bloor Street, Mississauga, Ku-L4y3t61
Canada, Ontario, Mississauga, L4y3t6
Ikhodi Yokuposa: L4y3t6
Ukubukwa okumangazayo kokuphuma kwelanga nokushona kwelanga kusuka kule suite ekhoneni elingamakhilomitha ayi-1065 onyawo e-Applewood Place. Kutholakala esitezi sama-22, leli gumbi lokulala eli-2, indlu yokugezela engu-2 inokusonga okukhulu okuzungeze kuvulandi otholwe yimigwaqo emibili eshibilika emnyango, indawo yokuhlala ngokusemthethweni / indawo yokudlela, ukudla okuvuselelwe ekhishini, izindlu zokugeza ezi-2 ezilungisiwe, iphansi le-hardwood flooring, isitoreji esivulekile se-suite igumbi, amawindi abuyekeziwe nendawo eyodwa yokupaka. Izinsiza zokwakha zifaka; ikamelo lezivakashi, ichibi elingaphakathi, i-spa, indawo yokuzivocavoca, uphahla oluphezulu, indawo yokusebenzela, igumbi lemidlalo, igumbi lephathi, isitolo esikahle, inkundla yethenisi, ukubeka ukuphepha okuluhlaza nokuphepha kwamahora angama-24. IBell FIbe iyatholakala. Ukuwasha okwabiwe esiteji esitezi. Isendaweni emaphakathi enikeza ukufinyelela okulula kwabagibeli, eduze kwamapaki, izikole kanye nezitolo.Izici Zokwakha Uhlobo lwendawo: AkukhoKwakha Izinsiza: Isikhungo SokuzivocavocaUkupholisa: Isimo sangaphakathi esimaphakathiUkuphela Kwangaphandle: I-ConcreteFoundation: I-Poured ConcreteHeating Fuel: Uhlobo lwemvelo lokushisa